I-Whyte vs Wallin, iParker vs Chisora ​​2 kunye neGarcia vs Martin ngo-2021
IBoxen247.com Iindaba Zamanqindi	Dazn, UDerek Chisora, UDillian Whyte, UGarcia noMartin, UJoseph Parker, umdlalo wamanqindi, UMikey Garcia, UOtto Wallin, IParker vs Chisora ​​2, USandor Martin, Kutheni uWaltte noWallin	0
UDillian Whyte no-Otto Wallin
UJoseph Parker vs. UDerek Chisora ​​2
I-DAZN kunye ne-Matchroom babhengeze ubusuku bokulwa beeprimiyamu ezintathu ukongeza kwishedyuli yokulwa eyandayo, bukhoma kunye nehlabathi liphela kwi-DAZN:
Nge-16 ka-Okthobha: Owayesakuba ngumlawuli wehlabathi onobunzima obune UMikey Garcia ibuyela kwisenzo ngokuchasene ne-European Super-Lightweight Champion USandor Martin eChukchansi Park eFresno, CA.
Nge-Okthobha i-30: I-WBC yeQela leNtshatsheli yeWavyweight yeHlabathi UDillian Whyte ujongene nomlo waseSweden UOtto Wallin, bahlala kwi-O2 eLondon nakwihlabathi liphela kwi-DAZN.
Nge-18 kaDisemba: Ubunzima UJoseph Parker kwaye UDerek Chisora Ukuphindaphinda kolunye ungqubano lwe-epic e-AO Arena eManchester, bahlala kwihlabathi liphela kwi-DAZN (ngaphandle kweNew Zealand neSamoa).
Okokuqala, inkosi enobunzima obune uMikey Garcia (40-1, 30 KOs) ubuyile ngoMgqibelo nge-16 ka-Okthobha e-Chukchansi Park e-Frenso, CA ngelixa ejongana ne-European Super-Lightweight Champion uSandor Martin (38-2, 13 KOs). UGarcia uhamba ngeentambo okokuqala ukusukela okoyisa uJessie Vargas eFrisco, TX ngoFebruwari 2020 kwaye indoda yaseCalifornia yamkela uSpaniard Martin kwilizwe lakhe, noMartin eza kulwa ngasemva kwezikhuselo ezibini eziphumeleleyo zomtya wakhe wase-140lbs waseYurophu . UGarcia-Martin uza kuphila kwihlabathi liphela kwi-DAZN kwaye uphakamise ikhadi elibekiweyo elinesihloko seHlabathi seLungelo kunye namathemba ashushu azokwaziswa kungekudala.
Kwiiveki ezimbini kamva, 'Umzimba oXutha' uDillian Whyte (28-2, 19 KOs) ubuyela kwiringi ngoMgqibelo, nge-30 ka-Okthobha, e-O2 eLondon, ejongene ne-Swedish Heavyweight Otto Wallin (21-1-0-1 , Ii-14 zeeKO). Inzalelwane yaseBrixton yaphindisela ukoyiswa kwayo kwangaphambili ngengxelo ejikeleze i-4 TKO ngokuchasene negqala lika-Alexander Povetkin kwaye yaphinda yabuyisa isihloko se-WBC seTyweightweight. UWallin uyaqhubeka nefomu yakhe entle eza kulwa, ebetha uDominic Breazeale kunye noTravis Kauffman emva kwesigqibo esenziwe ngamxhelo mnye ngokuchasene neqela eliphambili le-World Heavyweight Champion uTyson Fury. Umnyhadala uzakuboniswa kwihlabathi liphela kwi-DAZN.
Kwaye, ngoMgqibelo, nge-18 kaDisemba, uJoseph Parker (29-2, 21 KOs) ujongene ne-Brit Derek Chisora ​​(32-11, 23 KOs) kwimfazwe yabo yemijikelo eli-12 ngoMeyi 2021. Owayesakuba yintshatsheli ye-WBO Heavyweight, uzuze amanqaku amahlanu aphumeleleyo okoko waphulukana no-Dillian Whyte kwi-WBO International Heavyweight Title. UDerek 'War' Chisora ​​ujonge ukubuyela umva emva kokuphulukana nesigqibo esahlulwe ngokuchasene noParker kunye nesigqibo ngamxhelo-mnye ngokuchasene no-Oleksandr Usyk ngo-Okthobha ka-2020. Lo msitho uza kudlalwa kwihlabathi liphela kwi-DAZN (ngaphandle kweNew Zealand neSamoa).
Iinkcukacha ezigcweleyo zamakhadi ziya kukhutshwa kungekudala.
U-Ed Breeze, amalungelo e-EVP e-DAZN, uphawule wathi: “Le milo mithathu igqwesileyo ingqina ubambiswano olukhulu oluqhubeka nokuchuma neMatchroom kwihlabathi liphela. Ishedyuli yethu yonyaka ophelileyo iqulunqwa kakuhle kwaye igcwele iiNtshatsheli zeHlabathi, amagqala anamava, kunye neetalente ezizayo ezizayo. Sijonge ukuqhubeka nokutyhila ubusuku obuninzi bokulwa njengenxalenye yokuzibophelela kwethu ekuziseni ixabiso kubalandeli bamanqindi kwihlabathi liphela. ”
Usihlalo weMidlalo yase-Matchroom u-Eddie Hearn uthe: “Ishedyuli ezayo ye-Matchroom kunye ne-DAZN iye yangcono nangakumbi ngezi zongezo zintathu. Kuqala ngo-Okthobha u-16 inkosi enobunzima obune uMikey Garcia ubuyela esenzweni kwisabelo esinzima ngokuchasene neChampion yaseYurophu yase-Europe Super-Lightweight Champion uSandor Martin eFresno, CA. 'Umzingeli womzimba' uDillian Whyte ubuyela ekhaya e-O2 ngo-Okthobha u-30 ukubeka i-WBC yeWightweight World Title yakhe ngokuchasene no-Otto Wallin- indoda eyayisondele kakhulu ekwenzeni ilahleko kwiTyson Fury. Ke ngoDisemba 18 uJoseph Parker kunye noDerek Chisora ​​baya emfazweni kwakhona e-Manchester Arena. Yonke le midlalo yiqhubeni kwaye yenzelwe kuphela i-DAZN. ”
U-Jesus Correa woyisa u-Jesu Acosta e-Aguascalientes, eMexico	UBrandon Figueroa vs.Stephen Fulton Jr uhlehlise umhla we-27 kaNovemba